စစ်မှန်သော ကာရေဘီယံပွဲတော်ကြီးအတွေ့အကြုံ | သတင်းအမြန်
ကော်ပိုရိတ် | ကြော်ငြာ
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » သတင်းအမြန် » စစ်မှန်သော Caribbean Carnival အတွေ့အကြုံအတွက် ဤနွေရာသီတွင် Nevis သို့သွားပါ။
သတင်းအမြန် • စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်
စစ်မှန်သော Caribbean Carnival အတွေ့အကြုံအတွက် ဤနွေရာသီတွင် Nevis သို့သွားပါ။
ဘယ်အချိန်မဆို Caribbean ကျွန်း Nevis ကို သွားလည်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ ကျွန်း၏ပုံ-ပြီးပြည့်စုံသောကမ်းခြေများနှင့်ဖော်ရွေသောလူများသည်စစ်မှန်ပြီးဇိမ်ခံအားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ သို့သော် နွေရာသီပြက္ခဒိန်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော ပွဲမျိုးစုံဖြင့် ပြည့်နှက်နေသောကြောင့် အပန်းဖြေအားလပ်ရက်ကို ယဉ်ကျေးမှု သို့မဟုတ် ကြံ့ခိုင်ရေးပွဲတစ်ခုနှင့်လည်း တွဲမတွဲသင့်ပါ။
Nevis Tourism Authority (NTA) ၏ ယာယီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) Mr. Devon Liburd က “Nevis ဟာ နွေရာသီလတွေမှာ အားလပ်ရက်အတွက် အမိုက်စားနေရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောကျွန်းပေါ်တွင် ပျော်ရွှင်စရာများစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြက္ခဒိန်ရှိ မယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်အချို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ကပ်ရောဂါဘေးပြီးနောက် ဖြစ်ပျက်သွားနိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ် Nevisian အတွေ့အကြုံကို အပြည့်အဝရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။”
ဒီနွေရာသီမှာ သင်ဘာကြောင့် Nevis ကိုသွားသင့်လဲဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ပါ...
အံ့ဖွယ်သရက်သီး၏ အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား။
ကျွန်းပေါ်တွင် သရက်သီးမျိုးပေါင်း ၄၄ မျိုး စိုက်ပျိုးထားသဖြင့် သရက်သီးများသည် နီဗစ်ရှိုးပွဲ၏ ကြယ်ပွင့်များဖြစ်ပြီး၊ Nevis Mango ပွဲတော် ခြွင်းချက်မရှိတာ သေချာပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ Nevisians များသည် ကျွန်း၏အကောင်းဆုံးစားဖိုမှူးအချို့ (နှင့် Caribbean ၏) အကောင်းဆုံးစားဖိုမှူးအချို့ကို အသီးအနှံများဖြင့် အရသာရှိသော ဟင်းလျာများပြုလုပ်သည်ကို ကြည့်ရှုနေစဉ် နှိမ့်ချသောသရက်သီးအတွက် လုံးလုံးလျားလျားရည်ညွှန်းထားသည့် နှိမ့်ချသောသရက်သီးအတွက် သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တစ်လျှောက်လုံး အတူတကွလာရောက်ကြသည်။
ပါဝင်သည့်စားဖိုမှူးများသည် သင်တန်းတိုင်းတွင် သရက်သီးပါဝင်ရမည့် ဟင်းလျာကို ဖန်တီးကြသည်ကို မြင်တွေ့ရသော ရောထွေးသောအချက်အပြုတ်စိန်ခေါ်မှုကို လက်ခံကြသည်။ မလုံလောက်ပါက ကျွန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် သရက်သီးစားပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး သရက်သီးမှုတ်သွင်းထားသော ကော့တေးပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ အစားအသောက်ကြိုက်သူများအတွက် တစ်ချက်၊ ယခုနှစ် Nevis Mango Festival သည် ဇူလိုင်လ 01-03 ရက်နေ့ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သော ကာရေဘီယံပွဲတော်ကြီးအတွေ့အကြုံအတွက်၊ Nevis ၏ကိုယ်ပိုင်ပွဲတော်ကြီးပွဲထက် မပိုပါနှင့်။ Nevis ယဉ်ကျေးမှု. ဇူလိုင်လ 21 ရက်နေ့မှ 02 သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကျွန်း၏သမိုင်းတွင် အရေးကြီးဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်သည့် 1830 ခုနှစ်များတွင် ကျွန်များလွတ်မြောက်ရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထူးခြားသည့်ပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
12 ရက်ကြာ အခမ်းအနားသည် Nevisian အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု၏ ရှုထောင့်အားလုံးကို အာရုံစိုက်ပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ရောင်စုံချီတက်ပွဲ ပါဝင်သည်။ ရိုးရာဂီတ၊ ကခုန်ခြင်းနှင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဝတ်စုံများကို မျှော်လင့်ပါ။
သင်၏အပြေးဖိနပ်ကိုစီးပြီး သင်၏ကြံ့ခိုင်မှုကိုစမ်းသပ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် စိတ်အားထက်သန်သော အပြေးသမားများအတွက် စက်တင်ဘာလ၏ နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သည်။ Nevis မာရသွန်နှင့် အပြေးပွဲတော် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရခြင်းသည် အမှန်တကယ် မယုံနိုင်စရာ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်ခြင်းသင်တန်းသည် စိန်ခေါ်သည့်တောင်ကုန်းအချို့ကိုရင်ဆိုင်ရပြီး လမ်းတစ်လျှောက်တွင် မအောင်မြင်နိုင်သောမြင်ကွင်းအချို့ကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မည် - အနီးနားရှိညီအစ်မကျွန်း St. Kitts နှင့် သင်တန်းတစ်လျှောက် သင်ပြေးနေစဉ် Montserrat နှင့် Antigua ကျွန်းများကိုပင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ပျမ်းမျှ အပူချိန် 26°C နှင့် စိုထိုင်းဆ 80-90 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကာရေဘီယံပင်လယ်ရေများသည် အဆုံးစည်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီးသည်နှင့် သင့်အမည်ကို ခေါ်ဆိုပါလိမ့်မည်။
နွေရာသီတွင် ခရီးသွားများအတွက် ပိုမိုသက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် တည်းခိုရန် အခွင့်အလမ်းကို ပေးဆောင်ထားပြီး လူစုလူဝေးကို ရှောင်ရှားကာ အပူပိုင်းဒေသသစ်သီးများ ပေါကြွယ်ဝသော ကမ်းလှမ်းမှုကို ခံစားခွင့်ရရှိခြင်းဖြင့် Nevis သည် ယခုနှစ်နွေရာသီအားလပ်ရက်အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
Nevis နှင့် နွေရာသီပွဲများအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ www.nevisisland.com.
Nevis ၏နောက်ထပ်သတင်းများအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှု www.nia.gov.kn Nevis သို့ သင်၏ပြတင်းပေါက်။
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ ဂွါ | ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် | မွန်ဆာရတ် | ကာရစ်ဘီယံ | ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကီရီဘာတီကို ခရီးသွားမှာလား။ Mauri သည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရုရှားခရီးသွားလုပ်ငန်း- 10,000 တွင် 2021 သည် 435,000 တွင် 2022 သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
ယူဂန်ဒါမှ ဂွမ်ဒေါင်းသို့ တိုက်ရိုက်ပျံသန်းပါ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
အစ္စရေး၊ ဖန်ဆင်းရာမြေ ပါ၀င်သည်။ World Tourism Network ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
French Montana သည် Isle of MTV Malta 2022 တွင် ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း|
ဂွါ ကာရစ်ဘီယံ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် မွန်ဆာရတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ကနေဒါသည် လေဆိပ်စောင့်ဆိုင်းချိန်များကို လျှော့ချရန် ကြိုးစားနေသည်။
Holiday Inn Club Vacations သည် Guest Of Honor အစီအစဉ်ကို စတင်သည်။
Vancouver Aquarium ပြပွဲအသစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသ...
စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Wellbeing Class အသစ်။
ပါကစ္စတန် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းကို စွပ်စွဲ...
Costa Cruises သည် ၎င်း၏ C|Club ဆုပေးပွဲ အစီအစဉ်အသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Anguilla Tourist Board အတွက် အခန်းအသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါပြီ။
ကော်လိုရာဒို၊ Crested Butte ရှိ ဇိမ်ခံဟိုတယ်အသစ်
Cathay Pacific- ငှားရမ်းခပေးချေပြီး Asia Miles ကို ယခုရယူလိုက်ပါ။
QT ၏ ဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ် ဩစတေးလျနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ...
COVID ကူးစက်ရောဂါသည် ဟိုတယ်ခနှုန်းထားများကို ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။
ဆော်ဒီတွေ ဘယ်မှာ အများဆုံး ခရီးသွားကြမလဲ။
Four Seasons Hotel Westlake ရွာ- ဇိမ်ခံတောင်ပိုင်း...
ဆားလိတ်ခ်ကို လည်ပတ်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့်...
Caribbean သည် Airbnb Live နှင့် Work Anywhere တွင်ပါဝင်သည်...
လန်ဒန် Heathrow သည် ကြမ်းတမ်းသော အဖြစ်မှန်အသစ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Cabify သည် မက်ဒရစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ပထမဆုံး ရေယာဉ် ၄၀...
Viking သည် နောက်ဆုံးပေါ် သမုဒ္ဒရာသင်္ဘောကို ပို့ဆောင်ပေးသည်။
New Istanbul မှ Milan Bergamo သို့ AndaluJet လေယာဉ်
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးသည်နေ့- Wyndham ဟိုတယ်များ...
ကီရီဘာတီကို ခရီးသွားမှာလား။ Mauri သည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
Holland America Line ၏ Oosterdam သို့ ပြန်သွားရန်...
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ Taos Air မရပ်မနား အသွားအပြန် ပျံသန်းမှု နှင့်...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူ ခရီးသွားခြင်း- Amtrak ရှိ သယ်ဆောင်သည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစီအစဉ်...
MTV Push Live- PortAventura World နှင့် Paramount Spain...
ခရီးသွားချက်ပြုတ်နည်း- အနုပညာမြောက်မြားစွာနှင့်အတူ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု
နဝမ ဟော်လန် အမေရိက လိုင်း သင်္ဘော မှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည် ။
ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် ခရီးသွားလာရေး ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အသစ်မှ အကျိုးကျေးဇူး...
SAUDIA မှ B2B ခရီးသွားစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အသစ်ကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Grand Bahama ကျွန်းရှိ Cruise ဆိပ်ကမ်းအသစ်
မင်္ဂလာပါ အမိုက်စား။ အခုဆို Sofitel New York မှာ ရယ်စရာကောင်မလေး
Yellowstone National ဂုဏ်ပြုနည်းများ...
LIFESTREAM | BreakingNewsShow
ဟောင်ကောင်နန်းတော်ပြတိုက်- Charm Of The Orient - အထူးသတင်း ဇြန္လ 24, 2022
Galapagos ကို ခရီးဘယ်လောက်လဲ ဇြန္လ 24, 2022
ကိရိယာအသစ်တစ်ခုသည် Galapagos ကျွန်းများကို ခရီးသွားရန် လွယ်ကူစေသည်။ ဇြန္လ 24, 2022
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသည် အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့် ခရီးသွားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဇြန္လ 24, 2022
Wynn အပန်းဖြေစခန်းများ- မကာအိုတွင် ဂိမ်းကစားခွင့်ကို တိုးချဲ့ထားသည် - သတင်းများ ဇြန္လ 23, 2022
Le Méridien ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေစခန်းများ- ဘန်ကောက်မှ မောရစ်ရှပ်အထိ - သတင်းကောင်း ဇြန္လ 23, 2022
စစ်တမ်း- ခရီးသွားများ ၏ 94% သည် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ အဆင်ပြေသော နေရာများ အတွက် ဟိုတယ် အဆင်တန်ဆာများ တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည် - သတင်းများ ဇြန္လ 23, 2022
ပင်လယ်တွင် စစ်မှန်သော Gelato အတွေ့အကြုံ - Breaking News ဇြန္လ 23, 2022
Nashville ၏ Big Back Yard နွေရာသီပျော်စရာ - အထူးသတင်း ဇြန္လ 23, 2022
ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများ ခြေလျင်ခရီးနှင့် ခြေလျင်ခရီး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ - အထူးသတင်း ဇြန္လ 23, 2022
ဒေသတစ်ခုအကြောင်း သတင်းများအတွက် နှိပ်ပါ။
ကွန်ဂို (Dem Rep)
အမေရိကန် Virgin Islands
ခရီးသွားများအတွက် သတင်းများကို နှိပ်ပါ။
Breaking News Press Release ပို့စ်များအတွက် နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Breaking News ရှိုးများကို ကြည့်ရှုပါ။
Hawaii News Onine အတွက် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အစည်းအဝေးများ၊ မက်လုံးများ၊ သဘောတူညီချက်များဆိုင်ရာ သတင်းများအတွက် နှိပ်ပါ။
ခရီးသွား လုပ်ငန်း သတင်းဆောင်းပါးများအတွက် နှိပ်ပါ။
Open Source Press Releases အတွက် နှိပ်ပါ။
မူပိုင်ခွင့် @2022 TravelNewsGroup | eTurboNews